Vaovao - Inona no maha samy hafa ny fampisehoana LED, LCD, Projector ary DLP?
Terminal amin'ny fitaterana sy ny seranam-piaramanidina
Varotra fandraisam-bahiny sy fandraisam-bahiny
Hetsika fampisehoana an-tsehatra an-tsehatra an-tsehatra sy fampisehoana LED any am-piangonana
Ivon-kevitry ny Broadcast Studio Broadcast & Security
Fampiratiana ivelany LED Advertising Facade & Billboard
Fanamarihana momba ny fandefasana
Inona no maha samy hafa ny fampisehoana LED, LCD, Projector Ary DLP?
Ny LED dia "Light Emitting Diode", ny tarika kely indrindra dia 8,5 santimetatra, afaka mitandrina ny pixel sy ny fiovan'ny Module Unit, ny fotoana iainana mandritra ny 100,000 ora mahery.
Ny DLP dia "Digital Light Procession" mitovy habe amin'ny 50inch ~ 100inch, ora eo amin'ny 8000 ora eo ho eo. mila fanoloana ambongadiny raha manana olana ny bolam-bitsika sy ny tontonana.
1. Fampifanarahana ny famirapiratan'ny tontolo iainana
DLP \_ LCD fampisehoana tsy mazava. Ny famirapiratan'ny manodidina dia voafetra tanteraka ； tsy dia mendrika loatra ny birao avo na ny efitrano fifehezana.
Ny famirapiratan'ny jiro LED dia afaka manitsy eo anelanelan'ny 600-1500cd, mety amin'ny tontolo iainana isan-karazany.
2. Trangan-javatra miseho
Fanehoana LCD, ny eo aloha dia miaraka amin'ny tontonana mpitari-dalana translucent na jiro.
DLP amin'ny fampiharana azo ampiharina, dia hisy vokany taratra.
LED satria izy io dia tarika hazavana tampoka, ary tontonana mainty matte 、 mainty tariby tarihin'ny jiro, noho izany dia azo tazonina tsara ny fanehoana ny lokon'ny zoro.
3. jereo ny zoro
4. Mampitaha ny vokatry ny fampisehoana
5. ampitahao ny tahan'ny fampitahana
Ny jiro dia mampiasa jiro mainty, ny firafitra dia firafitry ny karazana absorption. saika tsy misy tsipika mahitsy taratry ny jiro, Ka ny tahan'ny fifanoheran'ny efijery LED hatramin'ny 4000: 1, dia mahatonga ny efijery fampisehoana LED ho maranitra sy mazava kokoa.
Ny ankamaroan'ny tahan'ny fampitahana an'ny projecteur DLP dia mety ho 600: 1 ka hatramin'ny 800: 1, ny vidiny ambany koa dia mety ho 450 ： 1。 Ny valan'ny mifanohitra amin'ny projector dia manodidina ny 400: 1, ary ny vidiny ambany dia 250 ： 1 fotsiny.
Rindrina horonantsary DLP
Ny DLP amin'ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana dia avo dia avo, toy ny maripana, ny hamandoana, ny vovoka, ny jiro sns sns, indrindra ny écran no mora tohina indrindra, ny tsipika manify tsy azo esorina sy amboarina, misy be ny manahirana azy tsy fotoana fotoana hianarana indray azy io, raha tsy izany dia hihemotra ho azy ny sary. Ny tena fifanoheran'i DLP dia ambany dia ambany, hita taratra amin'ny endrika tsy azo ihodivirana, izany hoe sary maro amin'ny maizina no tsy mazava, miharihary tokoa ity fisehoan-javatra ity. Toy ny kahie afaka mahita ny maizina endrika, ao amin'ny efijery DLP amin'ny mainty, tsy afaka manavaka, ka rehefa ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny sary, ny kalitaon'ny sary dia hihena be. Ny fahalemen'ny tetikasa DLP dia iray ihany, izany hoe "effets avana", ny fampisehoana manokana dia misaraka tsotra izao amin'ny lokon'ny monochrome telo mena, maitso ary manga, toa orana avana.
Rindrina horonantsary LCD
Ny fatiantoka mazava ho an'ny projecteur LCD dia ny mahantra mainty ary tsy dia avo loatra ny mifanohitra aminy. Ny loko maintin'ny projector LCD dia toa miloko fotsy foana, ary ny faritra alokaloka kosa dia maizina ary tsy misy pitsopitsony. Tena tsy mifanaraka amin'ny horonan-tsary ity, izay tsy dia tsara loatra amin'ny sarimihetsika, saingy tsy dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny projecteur DLP rehefa milalao teny. Ny lesoka faharoa dia ny vokatry ny projecteur LCD dia ny fisehon'ny endrika pixel, ary ny mpijery dia toa mijery ny sary amin'ny alàlan'ny lattice . Ny endrika SVGA (800 x 600) an'ny projecteur LCD, na manao ahoana na manao ahoana ny haben'ny sarin'ny efijery, dia azo jerena tsara ao amin'ny takelaka pixel raha tsy vokatra vokatra avo lenta no ampiasaina. LCD dia nanomboka nampiasa ny micro lens array (MLA), afaka manatsara ny fahombiazan'ny fampitana endrika XGA amin'ny takelaka LCD, ny famafazana ny valin'ny piksela, ny pikantsary pikantsana tsy mazava ary tsy mazava, ary ny hamafin'ny sary dia tsy hitondra fitaomana. Izy io dia afaka mampihena ny firafitry ny pixel an'ny LCD saika hitovy amin'ireo projecteur DLP, saingy mbola misy elanelana kely ihany.
Tombony HD LED
1.Mihoatra ny 100,000 ora amin'ny ora iainana
3.Fampisehoana loko tsara indrindra
2.Fampisehoana fanaparitahana hafanana ambony
4. Ny vidin'ny fikolokoloana ambany
1.Mihoatra ny 10 0000 ora ny fiainana
Ny velarana manjelanjelatra dia mitambatra, firafitry ny takelaka alimina, Fanaparitahana ny hafanana amin'ny vatana manontolo, mety ho fanaparitahana hafanana tsara indrindra ；
Fanaparitahana ny hafanan'ny profil: ny hafanana ao anaty boaty dia miparitaka amin'ny sisiny, avy eo ampifandraiso ireo takelaka, Ao amin'ny akorany aoriana amin'ny lafiny roa amin'ny fananganana ny fantsona ambony sy ambany, ny fampiasana tsindry rivotra hamoronana rivotra ambony sy ambany fitsipiky ny fivezivezena, fanaparitahana hafanana tanteraka.
Ny fitsipiky ny fampisehoana hazavana tampoka RGB dia mitazona ny maha-azo itokiana ny loko, manalavitra ny fahaverezan'ny loko sy ny fiviliana ateraky ny fitaovana sy ny lalana mihazakazaka eo amin'ny haitao momba ny jiro sy ny vinavina.
YWTLED All In One LED - Ny TV dia tarika hazavana tampoka, miaraka amina tontonana mainty mainty matevina, eo ambonin'ny vakana mainty, mba hitazomana tsara ny fampisehoana loko ny zoro fahitana.
Vidina fikojakojana ambany
Fitaovana mahazatra LED, tontonana kely kokoa ny tontonana fampirantiana; fampisehoana pixel dia misy jiro LED tsirairay.
Raha misy teboka nezotika dia soloina fitaovana hafa ary manamboatra jiro LED ；
Raha toa tsy azo sitrana ilay takelaka dia azo soloina ny takelaka fampirantiana kely ；
Ohatra, ny faritra fampisehoana 32-inch dia 4% fotsiny amin'ny tontonana nentim-paharazana.
Ny arusam-pirenena ankehitriny dia 46-inch, 55-inch, ary 60-inch splice unit, miaraka amin'ny vidiny ambany kokoa.
Tsy misy mahasamihafa ny LED aorian'ny fanamboarana ny tarika
Rehefa manolo ny LED tokana dia afaka misafidy ny jiro LED voatokana amin'ny famokarana. ary ny fanitsiana teboka tokana dia azo tanterahina hitazomana azy keep
Rehefa manolo ny maodelin'ny singa, ny modely sy ny takelaka iray manontolo dia ampiasaina amin'ny fanitsiana tsy tapaka, ka ny mari-pana sy ny famirapiratan'ny loko dia mifanaraka amin'ny toetran'ny volavolan-tetikasa ankehitriny.
LCD sary rindrina Fahasamihafana lehibe aorian'ny fanamboarana ny singa
Ny loko sy ny famirapiratry ny singa fanoloana dia fanjakana vaovao avokoa, tsy misy fihoaram-pefy, tena mitovy sy mamiratra ；
Ary ireo singa hafa tany am-boalohany, aorian'ny fampiasana maharitra, ny famirapiratan'ny famirapiratana sy ny efijery ary ireo antony hafa, toy ny volatilization ny vovoka maivana, ny loko ary ny famirapiratana dia nihena mafy
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny effets visuels。
Fotoana fandefasana: Nov-07-2020
Location: Community Yutang, Distrikan'i Guangming, Shenzhen, PR Sina
(Misy WhatsAPP & Wechat)